Hafnium Silicide, HfSi2 - Goodao Technology Co. , Ltd.
ဟတ်ဖ်နီယမ်ဆီလီဒီယမ်သည်အကူးအပြောင်းသတ္တုစီလီဒီယမ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်သောဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် Hafnium silicide သည်ဖြည့်စွတ်သတ္တုအောက်ဆိုဒ် semiconductor devices များ၊ ပါးလွှာသောအဖုံးအုပ်များ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ module များ၊ electrothermal element များ၊ thermoelectric ပစ္စည်းများနှင့် photovoltaic ပစ္စည်းများတို့တွင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ nano ပစ္စည်းများအထူးလျှပ်စစ်, optical, သံလိုက်နှင့် thermoelectric ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသနှင့်ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏လယ်ပြင်တွင်အလားအလာလျှောက်လွှာတန်ဖိုးကိုရှိသည်။
hafnium disilicide ၏ဂုဏ်သတ္တိများ
ဟက်ဖနီယမ်စီလီဒီယမ်ကိုဖြည့်စွက်ထားသောသတ္တုအောက်ဆိုဒ် Semiconductor စက်ပစ္စည်းများ၊ ပါးလွှာသောအဖုံးအုပ်များ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ module များ၊ electrothermal element များ၊ thermoelectric ပစ္စည်းများနှင့် photovoltaic ပစ္စည်းများတို့၏နယ်ပယ်များတွင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ nano ပစ္စည်းများအထူးလျှပ်စစ်, optical, သံလိုက်နှင့် thermoelectric ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသနှင့်ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏လယ်ပြင်တွင်အလားအလာလျှောက်လွှာတန်ဖိုးကိုရှိသည်။
hafnium disilicide ၏အသွင်အပြင်
ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှုအတွက် Hafnium silicide အသုံးပြုခြင်း
SiC ၏ 1. အဘိတ် - hfsi2 - TaSi2 ဆန့်ကျင် ablation ပေါင်းစပ်အပေါ်ယံပိုင်း။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအားဖြည့်ကာဗွန် (C / C) ပေါင်းစပ်မှုသည်အပူချိန်မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိသောပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖြင့်အားဖြည့်အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၎င်း၏အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောစွမ်းအား၊ ablation ခုခံနိုင်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောပွတ်တိုက်မှုနှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ၁၉၇၀ အစောပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် C / C ဖွဲ့စည်းမှုများမှတီထွင်ခဲ့သောအပူဖွဲ့စည်းမှုများအတွက် C / C ပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အပူကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများအပူရှိန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများ။ အပူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများအနေဖြင့် C / C ဖွဲ့စည်းမှုများသည်ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်အင်ဂျင်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၊ အာကာသလွန်းပျံယာဉ်၏နှာခေါင်းကူစက်၊ တောင်ပံ၏အရှေ့ဘက်အစွန်းစသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းအစိတ်အပိုင်းအများစုသည်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
သို့သော် C / C ပေါင်းစပ်မှုသည်ဓာတ်တိုးရန်လွယ်ကူပြီးပုံမှန်အားဖြင့် ၄၀၀ ℃အထက်အောက်ဆိုဒ်အောက်ဆိုဒ်တွင် အသုံးပြု၍ မရပါ။ ၎င်းသည် C / C ပေါင်းစပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သော anti-oxidation protection ကိုလိုအပ်ပြီး၊ anti-oxidation coating ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်အဓိကအကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်များအရ C / C ပေါင်းစပ်မှု၏ ablation ခံနိုင်ရည်အား Zr, HF, Ta, TiB2 နှင့်အခြားဆန့်ကျင်ဘက်သတ္တုများကိုကာဗွန် matrix တွင်ထည့်သွင်းသောအခါပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုပြသည်။ C / C ဖွဲ့စည်းမှုများ၏ ablative ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် HF နှင့် TA ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုနားလည်ရန် SiC - hfsi2 - TaSi2 ဆန့်ကျင်သော ablation အကာအရံများကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်သည်။ အဆိုပါအပေါ်ယံပိုင်း၏ ablation စွမ်းဆောင်ရည် oxyacetylene ablation device ကိုဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်။
2. အော်ဂဲနစ် electroluminescent ကိရိယာတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ခြင်း။ ၎င်းတွင် anode တစ်ခု၊ အလင်းထုတ်လွှတ်သောအလွှာတစ်ခု၊ အလင်းထုတ်လွှတ်သောအလွှာနှင့် anode ပေါ်ရှိ cathode များကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်ထုပ်ပိုးအဖုံးတစ်ခုပါရှိသည်။ ထုပ်ပိုးသည့်အဖုံးတွင်ဆီလီကွန်နိုက်ထရိတ်အလွှာနှင့်ဆီလီကွန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအတားအဆီးများပါဝင်သည်။ ကာဗိုက်အလွှာ; ဟက်ဖ်နီယမ်စီလီစီဒီ၊ တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်စီလီဒီဒီနှင့်ဒိုင်စလင်းဆေးတို့ပါဝင်သည်။ သတ္တုအောက်ဆိုဒ်ကိုမဂ္ဂနီစီယမ်အောက်ဆိုဒ်၊ အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်၊ တိုက်တေနီယမ်အောက်ဆိုဒ်၊ ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်တမ်တာလမ် pentoxide ။ အော်ဂဲနစ်အလင်းထုတ်လွှတ်သည့်ကိရိယာ၏သက်တမ်းသည်ရှည်လျားသည်။ တီထွင်မှုသည်အော်ဂဲနစ်လျှပ်စစ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက်၏ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
၃။ Si Ge သတ္တုစပ်အခြေခံသော thermoelric element ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း။ SiGe ကိုအခြေခံထားသော thermoelectric element သည် electrode layer၊ SiGe အခြေခံ thermoelectric layer နှင့် electrode layer နှင့် SiGe based thermoelectric layer တို့အကြားအတားအဆီးတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ အတားအဆီးအလွှာသည်ဆီလီကွန်နှင့်ဆီလီကွန်နိုက်ထရိတ်နှင့်ရောစပ်ပြီးအနည်းဆုံး molybdenum silicide, tungsten silicide, cobalt silicide, nickel silicide, niobium silicide, zirconium silicide, tantalum silicide နှင့် Hafnium silicide တို့ဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်ဂျာမေနီယမ်အလွိုင်းအခြေပြု thermoelectric အစိတ်အပိုင်းများသည်ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ထားခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောပျံ့နှံ့ခြင်းဖြစ်ရပ်များကို interface တွင်မတွေ့ရပါ၊ အဆက်အသွယ်ခုခံမှုသည်သေးငယ်ပြီးအပူထိတွေ့မှုအခြေအနေကောင်းမွန်ပြီးရေရှည်မြင့်မားသောအပူချိန်အရှိန်မြှင့်စမ်းသပ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ။ ထို့အပြင်ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းသည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်၏ကောင်းကျိုးများ၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ဈေးနှုန်းချိုသာမှု၊ အထူးစက်ကိရိယာများနှင့်အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုအတွက်သင့်တော်ပါသည်။
4. မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်နှင့် anti- ဓာတ်တိုး cermet ပေါင်းစပ်အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုး။ ပေါင်းစပ် film ကသွင်ပြင်လက္ခဏာကို refractory metal, refractory carbide နှင့် intermetallic ဒြပ်ပေါင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအထူအကျယ် 10 μm ~ 50 μ M. ဆန့်ကျင်ဘက်ကာဗိုက်အားကာဗိုက်အားဆီလီကွန်ဘိုက်နှင့်တာတလူလူကာဘိုက်၊ zirconium carbide နှင့် hafnium carbide တို့ပါဝင်သည်။ intermetallic ဒြပ်ပေါင်းများကို molybdenum silicide, tantalum silicide, zirconium silicide, Hafnium silicide, tantalum carbide, zirconium silicide နှင့် hafnium carbide တို့မှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဆိုပါအပေါ်ယံပိုင်း၏ကြည်လင်ဖွဲ့စည်းပုံ amorphous နှင့် / သို့မဟုတ် polycrystalline nanoparticles ကဖွဲ့စည်းသည်။
ရှေ့သို့ Tungsten ဆီလီကွန်, WSi2
နောက်တစ်ခု: နီအိုဘီယမ်ဆီလီကွန်၊ NbSi2
စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများ Hafnium ဆီလီကွန်စက်ရုံ
စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်း Hafnium ဆီလီကွန်ထုတ်လုပ်သူ
Hafnium silicide ထုတ်လုပ်သူများ
Hafnium silicide စျေးနှုန်း
Hafnium silicide ကိုးကား